प्रधानमन्त्रीको विकल्प खोज्नेहरु साम्राज्यवादीका एजेन्ट हुन् - www.khabardabali.com | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more प्रधानमन्त्रीको विकल्प खोज्नेहरु साम्राज्यवादीका एजेन्ट हुन् - www.khabardabali.com
प्रधानमन्त्रीको विकल्प खोज्नेहरु साम्राज्यवादीका एजेन्ट हुन्
चैत ३ गते, २०७६ - १५:१२
प्रधानमन्त्री विरामी भए पनि पार्टी र सरकारको कामकारवाहीमा कुनै असर परेको छैन । एउटा अध्यक्ष विमारी भएपनि अर्का कार्यकारी अध्यक्ष पार्टीमा छँदै छन् । सरकारको काम पनि चलिरहेकै छ ।
यहाँ नकारात्मक सोंच भएकाहरु एमसीसी, सीमासँग प्रधानमन्त्री ओलीलाई जोडेर खेदो खनिरहेका छन् । के एमसीसीको समस्या आजको हो ? सीमा समस्या आजको हो ? किन केपीसँग जोड्नु पर्यो ? उहाँको विकल्पमा कोही आउँदा नेपालमा बिहानको समस्या बेलुका समाधान हुने कुनै जादुगर छ ? सत्तारुढ दलभएको कारणले यावत समस्या समाधान गर्ने जिम्मा हाम्रो काँधमा छ । यसको मतलब हामी चुप लागेर बसीरहेका छौं ? कोरोना रोकथाममा पनि स्वास्थ्यमन्त्री क्रियाशील रहेका छन् । नेपाल सरकार छ । सबै काम भइरहेको छ । कोरोना नियन्त्रण गर्न सरकारले कुनै करस बाँकी राखेको छैन । यो त अनावश्यकरुपले त्रास सिर्जना गर्नकोलागि कर्पोरेट घरना, मिडिया, माफिया, तक्कर र वर्गशत्रुहरुले फैलाएको त्रासमात्र हो । नेकपामा पनि खास गरी ओलीलाई जोडेर गरिएको नियोजित डिजायन मात्र हो । कतिबेला कसको के हुन्छ ? कोही बिमार हुन्छ, कोही स्वस्थ हुन्छ । बिमारी हुने वित्तिकै प्रधानमन्त्री रोगी भए विकल्प खोज्नु पर्ने भन्ने हुन्छ ? यो भन्ने आधिकार पार्टी बाहेक अरु कसैलाई छैन । पार्टीले राम्रो काम गरिरहेकै छ ।
प्रधानमन्त्रीको किन विकल्प चाहियो ? कसलाई प्रधानमन्त्री बन्नु छ ? प्रधानमन्त्रीले आराम गर्नुहुन्छ । आरामको जरुरत पनि पर्छ । प्रधानमन्त्री डाइलोसिसमा हुँदा पनि देशको काम गरिरहनु भएको थियो । नेपालीले आवश्यकताभन्दा बढि कल्पना गर्छ । फाल्तु गफ गरेर हुन्छ ?
सयौं वर्षसम्म भारतीय सेना कालापानीमा आएर बसेको छ । राजा महेन्द्रको पालामा आएर बसेको हो । यसबीचमा दुई दर्जन शासक सत्तामा आए सीमा समस्या समाधान गर्न कसले पहल गर्यो ? २५ वर्ष कांग्रेसले शासन गर्यो, किन हटाउन सकेन ? तत्कालिन एमाले र माओवादी पटकपटक सरकारमा गए । कतिजना रक्षामन्त्री भए, त्यतिवेला किन महशुस गरेन ? ७२ ठाउँमा सीमा मिचिएको छ । एउटा गाउँमा पनि अमेरिकन फौज आएको छ र ? एक इन्ची जमिन कब्जा गरेको छ ? अनि अमेरिका आएर खाइदेला भनेर अनावश्यक हल्ला फैलाउनुको अर्थ के हो ?
यो सबै साम्राज्यवादी र भारतीय विस्तारवादीका एजेन्टहरुले फैलाएको हल्ला हो । त्यसकारण नेपालमा केही पनि भएको छैन । केपी ओलीको ठाउँमा ज्ञानेन्द्रलाई प्रधानमन्त्री बनाएर समाना गर्न सक्छन् ? शेरबहादुरले सक्छन् ? प्रचण्डले सक्छन् ? नेपालको जुन सामाजिक, आर्थिक अवस्था हो, ओली जीलेनै कति समाना गर्न सक्नुहुन्छ ? यसो भन्दैमा कुनै पनि चिजको नजर अन्दाज गर्नुपर्छ भन्न खोजिएको होइन । आवश्यक तयारी गर्नुपर्छ । जोगिनु पर्छ । सतर्कता अपनाउनु पर्छ । यस बारेमा काम भइरहेकै छ नि । अनावश्यरुपले उठाएका कुराहरुको पछि लागेर हुन्छ ?
चैत ३ गते, २०७६ - १५:१२ मा प्रकाशित